ဌာနင့် - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာသိပ္ပံဦးစီးဌာနဒြေရာထူးအမျိုးမျိုးများအတွက် applications များကဖိတျချေါ
ဖဲရ်ဖီးလ်အိုဝါမှာတည်ရှိပါတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်, ဘွဲ့, မာစတာနှင့် Ph.D ဘွဲ့ကိုရာပူဇော်သက္ကာကိုပုဂ္ဂလိက, non-profit, အပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းတစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးအတွင်းဒီဂရီ။ အဆိုပါဌာနကိုအသုံးချဆော့ဖ်ဝဲကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထူးပြုထားတဲ့ထူးခြားတဲ့နှင့်ကြီးထွားလာဘွဲ့ရအစီအစဉ်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ပညာရေးဆိုင်ရာပါဝင်မှုများအားလုံးအဆင့်ဆင့်အဘို့အ Applications ကိုနည်းပြ, လက်ထောက်, တွဲဘက်နှင့်အပြည့်အဝပါမောက္ခကနေကြိုဆိုကြသည်။ အချိန်ပြည့်ချိန်း, အခြိနျပိုငျးဒြေအပြင်သည်လည်းငါတို့အကွာအဝေးပညာရေး (DE) အစီအစဉ်တွင်သင်ကြားမှုအတွက်လျှောက်ထားရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။
လက်ထောက်, တွဲဘက်, ဒါမှမဟုတ်အပြည့်အဝပါမောက္ခ
လစာနောက်ခံနှင့်အတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီးညှိနှိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရာထူးဖြည့်မှီတိုင်အောင်သူတို့လက်ခံရရှိနေကြတယ်အဖြစ် Applications ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်။ လျှောက်ထားရန်, သင့်ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita အီးမေးလ်ပို့ (pdf ဖိုင်) မှ csnewfaculty@mum.edu ။ mum ဖဲရ်ဖီးလ်အိုင်အိုဝါမှာတည်ရှိပါတယ်နှင့်တန်းတူအခွင့်အလမ်းအလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များမာစတာပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုလည်းအခြိနျပိုငျးဒြေရှာကြံနှင့်ဒြေသွားရောက်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းဝင်းအပေါ်သင်တန်းများသင်ပေးရန်, သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းသင်တန်းများသင်ကြားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီသင်တန်းတလ format နဲ့ဆုံးမသွန်သင်သည်အဘယ်မှာရှိသည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု-system ပေါ်တွင် mum မှာအားလုံးသင်တန်းများသင်ကြားပေးကြသည်။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူသည်အခြားကတိကဝတ်နှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသို့မဟုတ်ဒြေ mum သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုသူတို့ရဲ့ဧရိယာ၌တစ်ခုတည်းသင်တန်းသင်ပေးဖို့စေသည်။ ကျနော်တို့က web application programming, algorithms, ကွန်ယက်, အဆင့်မြင့်ပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကား, ကြီးမားတဲ့ဒေတာ, စက်သင်ယူမှု, ကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်များနှင့်အပြိုင်ပရိုဂရမ်းမင်းအပါအဝင်ဘွဲ့ရ-Level အတန်းအမျိုးမျိုးသင်ပေးဖို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာကြ၏။
အခြိနျပိုငျးသင်တန်းပို့ချကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝေးသင်ပညာရေးအစီအစဉ်တွင်သင်ကြားမှုသင်တန်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဤသင်တန်းများတွင်ကျောင်းဝင်းထဲကနေမှတ်တမ်းတင်ထားသောသင်တန်းများအပေါင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သင်တန်းပစ္စည်းများပေါ်တွင်အခြေခံများနှင့်အပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အွန်လိုင်းမှပတ်ဝန်းကျင်တွင်စည်းရုံးနေကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များ Threaded ဆွေးနွေးမှုများဦးဆောင်နှင့်အွန်လိုင်းမှသင်ယူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သုံးပြီးကျောင်းသားမေးခွန်းများကိုနှင့်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်စာတမ်းများ addressing အပါအဝင်အွန်လိုင်းသင်တန်းကိုဖြန့်ဝေသူအပေါင်းတို့ရှုထောင့်, ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်တန်းများဗွီဒီယိုတွင်ဖမ်းဆီးရမိပြီး 14-ရက်သတ္တပတ်ကာလအတွင်းဆုံးမသွန်သင်တဲ့ format နဲ့အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ရှိသမျှရှိပြီးသားသင်ရိုးနှင့်အတူကောင်းစွာ-သတ်မှတ်ကြသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန် On-ကျောင်းဝင်းသင်တန်းများအနေဖြင့်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့။ လျှောက်ထားရန်, သင့်ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita အီးမေးလ်ပို့ (pdf ဖိုင်) မှ csnewfaculty@mum.edu .
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသို့မဟုတ်တွေ့ကြံပွင့်လင်းရာထူး View ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဒြေ.
ဖဲရ်ဖီးလ်အိုဝါမှာတည်ရှိပါတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်, ဘွဲ့, မာစတာနှင့် Ph.D ဘွဲ့ကိုရာပူဇော်သက္ကာကိုပုဂ္ဂလိက, non-profit, အပြည့်အဝအသိအမှတ်ပြုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းတစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးအတွင်းဒီဂရီ။ (ကြည့်ရှုပါ: www.mum.edu.)
အောက်ပါအရည်အချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်, စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရေး format နဲ့ထိရောက်စွာကျောင်းသားများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပြီး, ကျောင်းသားထောက်ခံမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုဖြစ်ထွန်းကြောင်းပညာသင်နှစ်နည်းပြများကိုတတ်နိုင်နေသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ, လျှောက်ထားရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DE သင်တန်းများပါဝင်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံ Coop အစီအစဉ်၌အကြှနျုပျတို့၏မာစတာအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ဒီ website မှာလေ့လာစူးစမ်း။ အကွာအဝေးပညာရေးဒြေရာထူးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်: csdedirector@mum.edu.
Ph.D ဘွဲ့ကို cognate လယ်ပြင်၌ဒီဂရီသို့မဟုတ်ညီမျှ။ (သိသိသာသာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူမာစတာရဲ့စဉ်းစားပါလိမ့်မည်)
ပိုမိုနှစ်သက်အွန်လိုင်းမှအဆင့်မြင့်ပညာရေး setting ကိုအတွေ့အကြုံသင်ကြားမှု
ကျမ်းစာ၌ရေးထားဆက်သွယ်ရေး format နဲ့ထိရောက်စွာကျောင်းသားများကိုထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စွမ်းရည်